Ụmụ Amaala traction transformer na ọtụtụ nde Euro nọrọ na Turkey - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỤmụ Amaala traction transformer na ọtụtụ nde Euro nọrọ na Turkey
Ụmụ Amaala traction transformer na ọtụtụ nde Euro nọrọ na Turkey
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, oru, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Metro Istanbul, Turkey, tram 0
Turkiyede ọtụtụ nde Euro nọrọ na ndị obodo traction transformer
Metro Istanbul achọpụtala ihe nrụpụta nke ụlọ na-enye ike nke metro na tramways. N'ihi ya, ọtụtụ nde euro ga-anọgide na oke nke obodo.
Istanbul Metropolitan Municipality nke Istanbul na ụzọ ụgbọ oloko enyemaka nke Istanbul, ma gbatara a isi ịga nke ọma n'ihi Turkey aku na uba. Company; achọpụtala ọrụ nrụpụta nke ndị na-ebugharị ebugharị na-enye ike maka ụgbọ ala ndị a na-eji metro, tram na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Na 2017, ebido oru ngo a na Metro Istanbul iji nwekwuo ọnụego ụlọ nke 3 na ndabere nke transformer na efu na ndabere nke onye na-agbanwe ihe na -emepụta ihe na mmepụta mmepụta ihe na-eweta ihe osise na njedebe nke ọnwa Septemba. A na-enye ndị ọrụ 2 onye na-agbanwe M1 Yenikapı-Atatürk Airport n'usoro Belpa ma malite ije ozi.
The mbụ mmepụta ke a ike na Turkey ...
Enwetala usoro ihe eji eme ka mmadụ na-agbanwe na eriri nke obodo Istanbul site na ndị ụlọ ọrụ sitere na Italy, Germany na Spain. -ikpọ ike mmepụta ke oge na obodo na ụlọ ọrụ ndị 2017 Metro Istanbul, nnyocha na-arụpụta ike nkwekọrịta Thunder Inc. maka oge mbụ na anụ ụlọ 3.3 MVA ike transformer traction aka a nkwekọrịta n'ihi na mmepụta na Turkey.
Ọnụ ego euro dubu 2 176…
Ọ bụ ezie na Metro Istanbul na-enye ọnọdụ ọrụ site na ịkwado ndị na-emepụta ya na ahụmịala usoro okporo ụzọ ya, ụlọ ọrụ ahụ emepụtala ndị ntụgharị n'efu ma nye ha ọrụ n'ọhịa. Ọnụ ahịa ahịa nke nkeji 2 nwere ikike 3.3 MVA dabere na ọnụahịa ịzụ ahịa gara aga 176.292 euro. Ọ bụrụ na anyị atụlee na ngụkọta ọnụ ahịa nke mgbanwe na M7 metro line bụ ihe dị ka 3.600.000 euro, ma ọ bụrụ na ejiri ụlọ nrụpụta ụlọ na mba anyị, a ga-eweta ọtụtụ nde euro ihe dị n'ụlọ.
Locomotive Ngwurugwu na Domestic Iji Zọpụta Ọtụtụ Nde Euro 22 / 11 / 2018 Veysi Kurt, onye isi nchịkọta nke TCDD Transportation, zara ajụjụ ndị gbasara ọgbọ ọhụrụ nke locomotive ugwo nke e nyere onyinye nke Turkey Turkey Industrial Design Award. TCDD Transportation General Directorate nke na-esote-emana ngwakọ shunting locomotive, Turkey Locomotive na Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ) na Kurt mesiri emepụta site ASELSAN imekọ ihe ọnụ, TCDD 2013 Na 6461 agukọta Iwu liberalization na deregulation iwu nke 2016 afọ na iwu chọrọ kwuru na ntinye n'ime ike nke TCDD akụrụngwa na ụgbọ okporo ígwè kewara abụọ, o kwukwara. Na-ekwu na TCDD bụ ọrụ maka akụrụngwa nakwa na Taşıma Taşımacılık A.Ş. kurul guzobere dị ka tren
Bursa Chamber of Mechanical Engineers Press Hapụ: Obodo Bursa Obodo Ukwu na-akwụ ọtụtụ nde euro na European ụgbọ ala 10 / 01 / 2013 Chamber of Mechanical Engineers Bursa Branch Press Hapụ: Bursa Metropolitan Municipality na-aṅa EUR ọtụtụ nde mmadụ na okporo ígwè ụgbọala nke na-ebute ọdịmma nke European scrap Self maara na-agụ esie ọnwụ na Mayor n'otu aka 'ụdị na-na-eke n'obodo' si n'aka nke ọzọ, na-ahụ scrap ụba okporo ígwè iga ndị Ontario rev. Metro na uhie okporo ụzọ, nke dị mkpa usoro njem ụgbọ njem nke obodo ụwa nke oge a, na-aga n'ihu na-agbasa na obodo dị iche iche nke Turkey na Bursa. O doro anya na ọ dị mkpa iji mụbaa okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè ndị dị oke mkpa na ngwọta nke nsogbu njem njem obodo. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka a dozie atụmatụ Ancak
Izmir Energy Sector Astor gbanwere na Transformer 25 / 05 / 2017 Izmir Energy Sector Astor zutere na nkesa: nkesa nkesa na-akpa xnumx't mmepụta ike kwubara mbụ na anụ ụlọ mmepụta nke ASTA World Inc. na Turkey. Ọ na-aga n'ihu ikwusa ọganihu nke mba anyị site na Nzukọ Nkwado Mpaghara. Astor enwe 5 percent of Turkey si ahịa, 60 mba anyị site exporting na mba gburugburu ụwa na-egosi ihe dị iche na Refeyim. N'ịga n'ihu nzukọ ọmụmụ ihe mpaghara n'enweghị oge izu ike ọ bụla, ASTOR Transformer bịara na ndị ọchụnta ego, ndị na-etinye ego na ndị na-eme ihe nchịkọta si Izmir. N'ọmụmụ ihe, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweta site na mpaghara ume na İzmir, ndị ọchịchị mesiri mkpa mkpa İzmir na ike ike
Alstom Grid Turkey a họpụtara ọhụrụ general njikwa nke Power nkesa Factory 16 / 06 / 2013 Alstom Grid Turkey Power nkesa a họpụtara ọhụrụ general njikwa nke factory: xnumx'l nke afọ amị ike nkesa na osisi ke Gebze, na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na ma site na-esite 1960% nke ya mmepụta "Eletrik nnyefe na nkesa na ngwá" Atiya mbupụ mmeri Alstom Grid Turkey ike A họpụtara Hakan Karadoğan na General Directorate of Transformers. Alstom Grid transformer n'ichepụta center na China na otu ọnọdụ na Turkey kenyere Karadoğan, Gebze ụlọ ọrụ 85 afọ mgbe e mesịrị, a họpụtara maka oge mbụ a Turkish president. Hakan Karadoğan gụsịrị akwụkwọ na Istanbul Technical University, Department of Electrical Engineering na 10. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ site n'aka Karadoğan, o mere ya na 1995 Karad
Gbanwee ụlọ ọrụ mgbanwe (Gbanwee Transformer Sanayi) 21 / 02 / 2010 Okwu: Station Nkeji iri na ise 1495 / 1 2 Street no.xnumx Gebze Kocaeli-Turkey Tel: + 41410 90 262 655 54 Fax: + 50 90 262 655 57 E-mail: info@sonmeztrafo.com.t mbubata / mbupụ -create Sonmez: osonmez@sonmeztrafo.com.tr TECHNICAL-Ümit Sönmez: usonmez@sonmeztrafo.com.tr Internet: www.sonmeztrafo.com.tr
Lọ ndị Turkey nwere ndị ọbịa
Locomotive Ngwurugwu na Domestic Iji Zọpụta Ọtụtụ Nde Euro
Bursa Chamber of Mechanical Engineers Press Hapụ: Obodo Bursa Obodo Ukwu na-akwụ ọtụtụ nde euro na European ụgbọ ala
Izmir Energy Sector Astor gbanwere na Transformer
Alstom Grid Turkey a họpụtara ọhụrụ general njikwa nke Power nkesa Factory
Gbanwee ụlọ ọrụ mgbanwe (Gbanwee Transformer Sanayi)
Gebze osisi na-emepụta ihe abụọ dị iche iche maka okporo ụzọ okporo ụzọ Germany
Dị ka Eltaş Transformer, anyị chọrọ ije ozi mba anyị
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ntụle nke Ịwube ọkụ na-agbanwe ihe ngbanwe
Ihe ngosi mgbasa ozi: TCDD 3 Regional Directorate nke Traction Car Rental Service Purchase